Voadika ny 11 Aogositra 2011 15:17 GMT
Andro manjombona ho an'i Cote d'Ivoire ny andro Zoma 5 aogositra. Olona 40 no namoy ny ainy ary sivy naratra noho ny fianjeran'ilay fiara tao anaty hantsana Ebrié niaraka tamin'ny mpandeha rehetra tao anatiny fitateran'olona an'ny orinasa mpitatitra Abidjaney (SOTRA) mampitohy ny faritra ao Vridi sy Adjamé . Namoaka didy 3 andro fisaonam-pirenena ny governemanta noho ny loza nitranga.
Mpianatra Ivoriana iray Wilfried Toussine (@Toussine), no nanome vaovao tamin'ny alalan'ny serasera, nanoratra hafatra fohy tao amin'ny bilaoginy izy vao maraimben'ny loza nitranga:
Nisy loza niseho androany maraina (5 aogositra 2001) tao Abidjan. Fiara mpitatitra iray an'ny orinasa Sotra (orinasam-pitaterana ao Abidjan) no nianjera androany maraina tao anaty hantsan'ny morondranomasina ao Ebrié hatreny amin'ny tetezana Felix Houphouët Boigny.
Nandefa vaovao mivantana tao amin'ny bilaoginy avy eo i Toussine nandritra io andro io mba hanarahana ny fandehan'ny fanavotana ireo olona niharam-boina. Azo jerena amin'izany ny fijoroana vavolombelona ataon'ireo nanatri-maso ny loza niseho, ao ihany koa ny horonantsary ahitana ny fanavotana natao hatramin'ny voalohany, sy ny sarin‘ny loza nitranga, izay nalefan'i Emmanuel René Oyoua tao amin'ny Facebook.
Niparitaka haingana dia haingana ny vaovao nalefa tamin'ny valantserasera, ka marobe ireo olona nandalo nijery ny zava-nitranga teo amin'ny tetezana izay nana-sarotra ny asa famonjena nataon'ny mpamonjy voina. Niala fiara iray teo amin'ny tetezan'i Houphouët-Boigny ny mpitondra ilay fiara fitaterana ka izay no mety antony nahatonga ny loza.
Abidjan, 5 aogositra 2011 : nitatitra ireo maratra sy niharan'ny loza ny mpamonjy voina taorian'ny loza niseho teo amin'ny tetezan'i Houphouet Boigny – Sary avy amin'i @Toussine tao amin'ny Twitpic, nahazoana alalana avy aminy
Namoaka lahatsoratra mikasika ny loza ny tranokalam-baovaon'olo-tsotra avenue225 izay mitondra ny lohateny hoe” Drame sur le pont FHB : Un bus de la sotra (ligne 19) dans la lagune” (loza mahatsiravina teo amin'ny tetezana FHB: Fiara mpitatitra sotra ( 19) ao anaty hantsan'ny morondranomasina). Tsy afaka mamaly ny fanontaniana maro apetrak”ireo Ivoiriana ny tompon'andraikitra ao amin'ny tranokala satria mbola miandry ny valin'ny fanadihadihana ofisialy.
Fa inona marina no niseho? Mbola tsy misy olona mahafantatra tsara izay zava-niseho. Saingy araka ny filazan'ireo nanatri-maso, taoriana kelin'ny tamin'ny 5 ora sasany maraina, ny fiara mpitatitra mampitohy an'i Adjamé mankany Vridi, izay hipoka olona tao anatiny no nianjera ka nilentika tanteraka tao anaty rano. Mbola tsy misy vaovao mari-pototra mazava tsara mikasika ny loza niseho.
Ny ampitson'ny loza, dia soratra mainty no tazana eo amin'ny pejy voalohan’ ny gazety Ivoiriana mpiseho isan'andro izay mampahafantatra ny loza niseho, tahaka ny gazetin'ny mpanohana ny governemanta Fraternité Matin (ankavanana) ,
Namorona karazana sary fampahafantarana tao amin'ny pejy Facebook sy Twitter ireo mpiserasera Ivoiriana ny andro nisehoan'ny loza mba hanome voninahitra ireo niharam-boina tamin'ny loza. Azo jerena ao amin'ny kaonty Twitter an'i Cyriac Gbogou ny iray amin'ireo sary fampahafantarana, ahitana soratra mainty hoe RIP (Mandria am-piadanana). Nisy koa ny tenifototra noforonina tao amin'ny Twitter mba hizarana hevitra mikasika ny loza nitranga tamin'ny fiara mpitatitra laharana 19 sy ny fanadihadihana momba izany : #civbus19.
Roa andro taorian'ny loza mahatsiravina, izay tsy loza tokana nitranga tamin'io andro io ihany tao Abidjan, dia mbola tsy manan-kambara foana ny Ivoiriana amin'ireo fanontaniana marobe manototra azy : Fa nahoana ? Inona no antony? Iza no tompon'andraikitra? Mbola azo antenaina ve ny fiara mpitatitra an'ny SOTRA? Nahoana ny fiara mpamonjy voina no tsy ampy fitaovana marobe ?.
Namaly haingana ny governemanta Ivoiriana ka tonga nitsidika teny an-toerana nitrangan'ny loza ny filoham-pirenena Ivoiriana Alassane Ouattara. Namoaka didy 3 andro fisaonana ny governemanta ka nampandeferina ny fankalazana ny faha 51 taonan'ny fahaleovantenan'ny firenena izay tokony natao tamin'ny 7 aogositra, mba ho fanajana ireo niharam-boina.